नेपाल आज | आखिर आनन्द अरुणबाट महिलाहरुले के पाउँछन् ‘गुरुप्रसाद’ ? (भिडियोसहित)
सोमबार, ०५ कार्तिक २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
आश्रमसँगै सडकको पुलतर्फ ठूलठूला घरहरू बनेका छन् । त्यहाँ कोठाहरू खरिद बिक्क्री हुने गर्दछ । १५ देखि ६५ लाख रुपैयाँसम्मका कोठाहरू खरिद गर्न सकिन्छ । समाज कल्याण मन्त्रालयमा दर्ता भएको एनजीओले सरकारबाट प्राप्त रेडबुकबाट कसरी पैसा पायो ? पोखरामा रहेको उपवन आश्रममा भित्रै ५ करोडको घर बनाइएको छ ।
एउटा महिलालाई यौनदुव्र्यहार गरेका थिए, मैले ती महिलालाई भने, ‘मालासाला फालेर बाहिर निस्किन सक्छौ भने आवाज उठाउन किन नसकेको त ? ती महिलाले, ‘अहिले त होइन तर एक दिन अवश्य बाहिर आएर आवाज उठाउने छु’ भनिन् । जुन महिलामाथि त्यस्तो यौन गतिविधि भयो उनै महिला ठूलठला सभाहरूमा महिला सशक्तिकरणको भाषण दिएर हिँड्छन् । यस्ता यौनहिंसा र दुव्र्यव्यवहार गरेको थुप्रै महिलाका कथाहरू छन् ।
आश्रममा ओशोको काम गर्ने हो नि भन्दै मासिक तलब २ हजार दिएर मान्छे खटाइएको छ । त्यति थोरै पारिश्रमिकमा बिहान ६ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म काम गर्नुपर्छ ।
ओशोको नामले गर्दा कसैले पनि आवाज उठाउँदैनन् । भान्छादेखि लन्ड्रिमा काम गर्ने आठ–दश जना छन् । एक जना धेरै पुरानो सन्यासी हुनुहुन्छ, उहाँ बिरामी भएपछि काम गर्न नसक्ने भएपछि अचानक तपोवनबाट निकालिदिए । काम लागुञ्जेल राख्ने अनि काम नलाग्ने भएपछि निकालिदिने त्यहाँको परम्परा छ ।
सहमतिमा नभई पुरुषको शक्तिमा भएका गतिबिधिलाई यौनहिंसा भएको नै भनिन्छ । विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा पारेर, धम्की दिएर व्यापकरूपले यौन शोषण गरिएको छ । आश्रमबाट धेरै महिलाहरू पीडित भएर निस्किने गरेका छन् । केहि भने 'क्लिनिकल डिप्रेसनमा' पनि परेको बताइन्छ ।
अवैध हतियार राख्ने गरेको
आश्रममा बादर मार्ने भनेर सुरक्षा निकायलाई प्रभावमा पारी अवैध रूपले हात हतियार राख्ने गरिएको छ ।
विविध आरोपको विषयमा हामीले तपोवनका एक सञ्चालक राजु रिमालसँग जिज्ञासा राखेका थियौं । उनले भने, ‘तपोवनको दुष्प्रचार गर्न नियोजीत रूपमा गरिएको क्रियाकलाप हो । मिडिया पनि प्रयोजीत भए । नेपालभरी ख्याती भएको प्रतिष्ठित मान्छेलाई आशाराम भनेर आरोप लगाएर दुष्प्रचार गर्ने प्रपञ्च हो । नियोजितरुपमा तपोवनलाई सिध्याउन पश्चिमा शक्तिहरु लगिपरेका छन् ।’
यसैगरी तपोवनका अध्यक्ष रमेश राजकर्निकारले विविध आरोपको खण्डन गरे । आरोपका विषयमा उनको भनाई यस्तो छः
तपोवनमा लागेका आरोपको विषयमा मलाई धेरै जानकारी छैन । केहि असन्तुष्ट व्यक्तिले आधारहिन आरोप लगाएका छन् । त्यस्तो केहि भएको रहेछ भने आधार, प्रमाण ल्याएर पुष्टि गर्नुपर्‍यो ।
तपोवन ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । अन्य जमिन धार्मिक वनको रूपमा लिजमा सरकारबाट लिएर संरक्षण गरेका छाै । हामीले हाउजीङ व्यवसाय गरेका होइनौँ, आश्रम बनाएका हाै र विभिन्न मानिसलाई सेवा दिएका छाै । यसरी साधकहरुलाई घर बनाउँदा खर्च लाग्छ, हामीले पनि साधकहरुलाई किचेन, मेडिटेसन हललगायत अत्याधुनिक सुविधा दिएर शुल्क लिएका हौं ।
यो अंशु कविराको निजी विचार हो । उहाँको विचारसँग नेपालआजको धारणा सम्बन्धित छैन ।– सम्पादक ।
ओशो तपोवन अंशु गुरुङ